Madasha xisbiyada Qaran oo ku hanjabay inay dowlad kale ka dhisi doonto Dalka. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Madasha xisbiyada Qaran oo ku hanjabay inay dowlad kale ka dhisi doonto Dalka.
Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha madasha xisbiyada Qaran, oo galabta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay hannaanka ay ku shaqeyneyso dowladda federaalka Soomaaliya.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa “wax aan la aqbali karin” ku tilmaamay in xilka Ra’iisul Wasaaraha aan wali la magacaabin.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhaliilayo sida uusan wali usoo magacaabin Ra’iisul Wasaare cusub.
“Waxaa la yiraahdaa dastuurka kuma jirto xilliga kama dambeysta ah ee lagu soo xulayo Ra’iisul Wasaare, laakiin curfi siyaasadeed ayaa soo jiray. Dalkan marki uu xorriyadda qaatay ilaa markii uu Xasan Cali Kheyre xilka ka dagay ma dhicin madaxweyne 30 maalmood ka badan heystay magacaabista Ra’iisul Wasaaraha, sidoo kale Ra’iisul Wasaare la magacaabay oo 30 maalmood ka badan xukuumad kusoo dhisi waayay ma jirin,” ayuu yidhi.
Hoggaamiyaha xisbiga Ileys, Cabdiqaadir Cosoble, ayaa ku gooddiyay in haddii sida ay ka digayaan la sameeyo ay dhankooda ka billaabi doonaan hannaan dowlad lagu soo dhisayo.
“25-kii July wixii ka dameeyay, sharci kasta iyo nidaam kasta oo ay xukuumaddii Ra’iisul Wasaaraheeda la riday ay meel mariso waxaa u aragnaa inay tahay sharci darro. Qof Soomaali ah oo lagu qaadi karo ama ay waajib ku tahay heshiis kasta oo ay soo saxiixaan xukuumadda noocaas ah ma jiro. Waxaan rabnaa madaxweyne Farmaajo inuu sharciga ilaaliyo. Haddii sida uu maanta sharciga ugu tumanaayo sii wado ha ogaado in Soomaalida uusan madaxweyne u ahayn wixii ka dambeeya maalinta uu waqtigiisa ku egyahay. Xitaa haddaan aragno inuusan doorasho diyaarineynin waqtigaas, annagu waxaan billaabi doonaa hannaan kale oo barbar socda oo dalka loogu soo dhisayo dowlad.” Ayuu yidhi Cosoble.
Siyaasiyiinta maanta shirka jaraa’id qabtay ayaa madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada ee uu shirka u socdo ku boorriyay inay isku soo waafaqaan wax ay ugu yeedheen “arrimo u cuntami kara”.
Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo dowladda federaalka ay kasoo saartay hadalka hoggaamiyeyaasha mucaaradka, oo ay ugu jawaabeyso eedeymahooda.
Hoos ka akhriso war-saxaafadeedka oo dhameystiran: